2010 Winter Olympic champion Kim Yu-na - video.phpmyanmar.com
2010 Winter Olympic Champion Kim Yu-na
Posted By - Ko Ko - May 10, 2010
Kim Yu-na & Rain are2of 'TIME’s 100 Most Influential People'
The new CF queen is Kim Yu-na
အိုလံပစ်စကိတ်ချန်ပီယံ Kim Yu-na
၂၀၁၀ ခုနှစ် ကနေဒါ နိုင်ငံ Vancouver တွင်ဲပြုလုပ် သော Winter Olympic တွင် ကိုးရီးယား နိုင်ငံသူ Kim Yu-na (19) သည် အမျိုးသမီး figure skating ပထမ ရွှေတံဆိပ် ကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့ပါသည်။
Kim Yu-na ၏ ရမှတ် မှာ 228.56 ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသမီး figure skating ရာဇဝင် တွင် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များသာ ရလေ့ ရှိသော အမှတ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
Kim Yu-na's famous 007 shoot out
Kim Yu-na ကို ကိုးရီးယား တစ်နိုင်ငံ လုံးမှ အလွန် ချစ်ကြ သည့် အပြင်၊ နိုင်ငံ့ သူရဲကောင်း တစ်ဦး အဖြစ်ပါ သတ်မှတ်ထား ကြပါသည်။ သူမကို Queen Yu-na ဟုလည်း နာမည်ပြောင် nick name ပေးထား ကြပါသည်။
Kim Yu-na and her coach Brian Orser
ကနေဒါ နိုင်ငံ Vancouver တွင် Yuna အပြီးသတ် ပြိုင်ပွဲ ဝင်နေစဉ် လူအများ TV ရှေ့ ရောက်နေကြ သဖြင့် ကိုးရီးယား တစ်နိုင်ငံ လုံး လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့ ပါသည်။
Beautiful Kim Yu-na
ကမ္ဘာကျော် Times Magazine မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် လူသိ အများဆုံး ၁၀၀ online လူရွေးပွဲ တွင် Kim Yu-na ပါလာ ပါသည်။ Times100 တွင် ပါလာသူ နောက်တစ်ဦး မှာ အဆိုတော် မင်းသား Rain ဖြစ်ပါသည်။
2010 Winter Olympic Kim Yu-na Short Program (YouTube)
2010 Winter Olympic Kim Yu-na Long Program (YouTube)
A Kim Yu-na's commercial photo
Kim Yu-na သည် ကိုးရီးယား တွင် ကြော်ငြာ အများဆုံး ရိုက်ရသည့် မင်းသမီး တစ်လက် လည်းဖြစ် ပါသည်။ ကျန် မင်းသား မင်းသမီး များမှာ သူ့နောက်တွင် ရှိပါသည်။ Kim Yu-na သည် သီချင်းဆို လည်းအလွန် ကောင်းပြီး အကလည်း တော်ပါသည်။
Kin Yu-na duringacommercial filming (YouTube)
Kim Yu-na သည် figure skating ကို ၇နှစ် သမီး ကတည်းက ဆက်တိုက် ပြိုင်ပွဲများ ဆုအများ အပြား ရရှိ ခဲ့ပါသည်။ Kim Yu-na ၏ profile နှင့် အနိုင် ရရှိ ခဲ့သည့် ပြိုင်ပွဲများ စာရင်းမှာ အောက်ဖေါ်ပြ ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Profile of Kim Yu-na
Full name: Kim Yu-Na (single)
Date of birth: September 5, 1990(age 19)
Place of birth: Bucheon , Gyeonggi-do
Home town: Gunpo , Gyeonggi-do
Residence: Seoul , South Korea & Toronto, Canada
Choreographer: David Wilson & Sandra Bezic
Skating club: Toronto Cricket, Skating and Curling Club
Competitive highlights, Senior Results
World Championships 3rd 3rd 1st 2nd
Trophée Eric Bompard 1st 1st
Competitive highlights, Junior Results
South Korean Championships 1st J. 1st S. 1st S. 1st S. 1st S.
Junior Grand Prix, Hungary 1st
Senior level, N = Novice level, J = Junior level
Tags: korean news | korea
Summary - Kim Yu-Na born September 5, 1990 in Bucheon, Gyeonggi-do, isaSouth Korean figure skater. She is the 2010 Olympic champion in ladies singles, the 2009 World champion, the 2009 Four Continents champion,athree-time (2006�2007, 2007�2008, 2009�2010) Grand Prix Final champion, the 2006 World Junior champion, the 2005�2006 Junior Grand Prix Final champion, andafour-time (2002�2005) South Korean national champion. The 19 year old athlete was featured in 15 commercials in the period ofayear in Korea. She reportedly get in between 300 to 400 million (240-320 thousand USD) fora3-6 month contract. On April 29th, the American TIME magazine announced the final results of their online poll for [World�s Most Influential 100 People] on their official homepage and Yuna is one of the Times100.
End of Article - 2010 Winter Olympic champion Kim Yu-na
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/488/2010-winter-olympic-champion-kim-yu-na
Rendering time 0.0578 sec *
3aae5b4020d2267f61d80e15adb77504 - January 16, 2018 - 4:02:30 am